Intifaacsiga Dakhliga Khayraadka Dabiiciga Ah (Shiidaalka Iyo Macdanta) | Marsa News
Intifaacsiga Dakhliga Khayraadka Dabiiciga Ah (Shiidaalka Iyo Macdanta)
April 9, 2018 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Dakhliga khayraadka Dabiiciga ah ee Shiidaalka iyo Macdantu waxay ka mid yihiin nimcooyinka ilaahay ku manaystay bini aadamka.
Sida nimcooyinka faraha badan ee ilaahay ku galladay bini aadamka Shiidaalka iyo Macdantuna waxay leeyihiin laba weji oo ku xidhan hadba qaabka iyo hanaanka loo maamulo dakhligaas iyo sida looga faa’ideeyo dadka iyo umadda markaas nimcadaasi dhulkeeda ku duugantahay.
1. Waji Wax dhisa:
Waxa uu ku yimaada marka loo maamulo dakhligaas si masuuliyadi ku dheehan tahay iyadoo lagu maamulayo khayraadkaas cadaalad, taxadar iyo aqoon, marka intaas la helo waxa uu noqdaa dakhliga khayraadkaas kasoo xaroodaa mid wax dhisa, oo dalkaas dhaqaalihiisa, horumarkiisa, kaabayaashiisa dhaqaale iyo aqoonta shacabkaba kor u qaadda.
2. Waji Wax Dumiya:
Waxa uu ku yimaada marka loo maamulo dakhligaas si masuuliyad darro ku dheehan tahay oo shacabka iyo umadda aan la gaadhsiin oo eex, musuqmaasuq, cadaalad daro iyo qorshe xumo lagu dhiso qaybinta iyo maamulka dakhligaas, arintaas oo aakhirka dumisa dhaqaalaha iyo midnimada iyo isku duubnaanta dalkaas ama umaddaas.
Haddaba si aynu u fahano qaabka iyo hanaanka labada waji ku yimaadaan waa in aynu diraaseeno oo aynu isla fahano dalalka adduunka kuwa ka faa’iideestay dakhligaas dabiiciga ah iyo dalalka dakhligaasi ay ku noqotay habaar iyo musiibo (Resource Curse).